Buy Apartment Rent in Sanchaung(ID-244) (11Lks) in Sanchaung on ipivi.com
Dagon Myothit(East) Yangon Region
Apartment Rent in Sanchaung(ID-244)
Active on site: 79 days
Views: 111 (+1)
Apartment for rent in Sanchaung Township. 1200 sqft living area , organized by Living-room, One Master Bed-room, One Single Bed-room, Dinning, Kitchen and Bath-rooms. Fully furnished and two air-conditioned. Apartment has lift.
Asking price - 850 USD (Nego)
စမ်းချောင်းမြို့နယ်တွင် တည်ရှိသော ငှားရန်တိုက်ခန်းဖြစ်ပါသည်။ တိုက်ခန်းအကျယ် - ၁၂၀၀ စတုရန်းပေရှိပြီး ဧည့်ခန်း၊ အိပ်ခန်းကျယ် တစ်ခန်း၊ အိပ်ခန်းငယ် တစ်ခန်း၊ ထမင်းစားခန်း၊ မီးဖိုချောင်နှင့် ရေချိုးခန်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ လေအေးပေးစက် နှစ်လုံးနှင့် ပရိဘောဂအသုံးအဆောင်များ အသင့်ထည့်သွင်းပါရှိပါသည်။ ဓာတ်လှေကားပါရှိသည့် တိုက်ခန်းဖြစ်ပါသည်။
စမ်းချောင်းရှိ ငှားရန်တိုက်ခန်း (ID-244)
Name: Apartment Rent in Sanchaung(ID-244)
Yangon Region , Sanchaung
Active on site 79 days